PC နှင့် Android အတွက် Nintendo Switch Emulators | မိုဘိုင်းဖိုရမ်
Ignatius ခန်းမ | 20/11/2021 12:00 | အစီအစဉ်များ
2016 ခုနှစ်တွင် စတင်ရောင်းချချိန်မှစ၍ Nintendo Switch သည် consoles များထဲမှတစ်ခုဖြစ်လာသည်။ မကြာသေးမီနှစ်များအတွင်း ရောင်းအားအကောင်းဆုံး၎င်း၏ပရိသတ်များပါရှိသော သယ်ဆောင်ရလွယ်ကူသော ကွန်ဆိုးလ်တစ်ခုဖြစ်ပြီး ၎င်းသည် Nintendo ဂန္တဝင်များနှင့် ကလေးသူငယ်များကို နှစ်သက်သူများမှလွဲ၍ အခြားမရှိပါ။
Nintendo Switch သည် အချိန်ကြာလာသည်နှင့်အမျှ စျေးနှုန်းကျဆင်းသွားခြင်းမရှိသည့် ကွန်ဆိုးလ်တစ်ခုဖြစ်ပြီး မဖြစ်နိုင်သလောက်မဟုတ်ပါက ဤကွန်ဆိုးလ်အတွက် စိတ်ဝင်စားဖွယ်ကမ်းလှမ်းမှုများကို ရှာဖွေရန် အလွန်ခက်ခဲပါသည်။ ဝယ်ဖို့မတတ်နိုင်ရင် တစ်မျိုးသုံးလို့ရတယ်။ PC နှင့် Android အတွက် Nintendo Switch emulator
PC နဲ့ Android အတွက် Apple က emulator app တွေကို App Store မှာ ရနိုင်ခွင့်မပေးတာကြောင့်၊ Nintendo Switch ကိုကစားရန် iOS စက်ကို အသုံးပြုပါ။ ၎င်းသည် ရွေးချယ်ခွင့်တစ်ခုမဟုတ်ပါ။
1 PC အတွက် Nintendo Switch emulators
2 Android အတွက် Nintendo Switch emulators
3 Nintendo Switch emulator များသည် တရားဝင်ပါသလား။
PC အတွက် Nintendo Switch emulators
Yuzu emulator သည် ယခုအချိန်အထိ၊ PC အတွက် နာမည်အကြီးဆုံး Nintendo Switch emulator ကျွန်ုပ်တို့သည် အကောင်းဆုံးစွမ်းဆောင်ရည်ဖြင့် Switch ဂိမ်းတိုင်းနီးပါးကို ဆော့ကစားနိုင်ပါသည်။
ဤ emulator ကို ဖန်တီးထားသည်။ Citra developer များလူကြိုက်များသော Nintendo 3DS emulator ဖြစ်သည်။ emulators လောကမှာ အတွေ့အကြုံမရှိသော သုံးစွဲသူများအတွက်၊ သို့သော် အစပိုင်းတွင် အနည်းငယ် ခက်ခဲနိုင်ပြီး အင်တာနက်နှင့် YouTube တွင် လမ်းညွှန်များနှင့် သင်ခန်းစာများစွာရှိသည်။
Yuzu သည် အလွန်ရေပန်းစားသောကြောင့် Switch အတွက် အခြားသော emulator များကို ဖန်တီးရန်အတွက် အခြေခံအဖြစ် အသုံးပြုထားသောကြောင့် ဤဆောင်းပါးတွင် သင့်အား ပြသပေးမည်ဖြစ်ပါသည်။ 4K ရုပ်ထွက်အထိ ကစားပါ။ကျွန်ုပ်တို့၏စက်ပစ္စည်းသည် စွမ်းဆောင်ရည်ကောင်းမွန်ပြီး Nvidia နှင့် AMD ဂရပ်ဖစ်တို့နှင့် တွဲဖက်အသုံးပြုနိုင်ပါက။
၎င်းကိုထောက်ခံသည်။ triple A ဂိမ်းအများစုထို့ကြောင့် ကျွန်ုပ်တို့သည် Legend of Zelda အဖြစ် ဤကွန်ဆိုးလ်၏ ဆွဲဆောင်မှုအရှိဆုံး အရောင်းရဆုံးများကိုမဆို ကစားနိုင်ပါသည်။ ဒီထဲမှာ link ကိုYuzu နှင့် တွဲဖက်အသုံးပြုနိုင်သော ဂိမ်းများစာရင်းကို သင်တွေ့နိုင်သည်။
ဤ emulator ၏ အပျက်သဘောဆောင်သည့်အချက်များ မှာ ထိုအချက်ပင်ဖြစ်သည်။ ထိန်းချုပ်ကိရိယာအားလုံးနှင့် ကိုက်ညီမှုမရှိပါ။ဓာတ်ပုံများ၏ သတ်မှတ်အမြန်နှုန်းကို ထိန်းသိမ်းခြင်းနှင့် စဖွင့်သတ်မှတ်သည့်အခါ ၎င်း၏ရှုပ်ထွေးမှုများနှင့် ပတ်သက်လာလျှင် ပြဿနာများ။
Yuzu ကိုဒေါင်းလုဒ်လုပ်ရန်၊ သင်သည်ရပ်တန့်နိုင်သည်။ ဤ open source ပရောဂျက် y အခမဲ့ဒေါင်းလုဒ်လုပ်ပါ။.
YuZu နှင့်မတူဘဲ Ryujinx သည် emulator တစ်ခုဖြစ်သည်။ configure လုပ်ရတာ ပိုလွယ်တယ်။သို့သော် ၎င်းသည် ကျွန်ုပ်တို့အား တူညီသောအင်္ဂါရပ်များကို မပေးဆောင်သော်လည်း ၎င်းအား PC၊ Mac သို့မဟုတ် Linux တွင် Nintendo အား အတုယူရန် ဒုတိယအကောင်းဆုံးရွေးချယ်မှုအဖြစ် ကျွန်ုပ်တို့ယူဆနိုင်ပြီး ဂိမ်းများကို အများဆုံး 60 fps ဖြင့် လုံလောက်သောတည်ငြိမ်သောနည်းလမ်းဖြင့် ဂိမ်းများကို run နိုင်စေပါသည်။ ဟာ့ဒ်ဝဲ။
Configure လုပ်ရန်ပိုမိုလွယ်ကူသောကြောင့်၊ သင့် PC တွင် Switch ဂိမ်းများကိုခံစားရန် သင့်ဘဝကို ရှုပ်ထွေးရန်မလိုအပ်ပါက၊ ၎င်းသည် အကောင်းဆုံး application ဖြစ်သည်၊ အသုံးပြုရန်အလွန်ရိုးရှင်းသော interface ပါရှိသော application တစ်ခုဖြစ်သည်။ တွဲဖက်ဂိမ်းပေါင်း 1.000 ကျော်ရှိပါတယ်။ယနေ့ခေတ်တွင် ၎င်းတို့အနက်မှ ထက်ဝက်ခန့်သာ မှန်ကန်စွာ လုပ်ဆောင်နေပါသည်။
Ryujinx emulator ကို ဒေါင်းလုဒ်လုပ်ရန်၊ သင်သည် ၎င်းကို ပြုလုပ်နိုင်သည်။ သင့်ဝက်ဘ်ဆိုက်မှ ကိုနှိပ်ပါ ဒီ link ကို.
Cemu က တယောက်ပါ။ Nintendo Switch ဂိမ်းများကို အသုံးပြုနိုင်သည့် ပထမဆုံး emulators များသို့သော်၊ ထို့အပြင်၊ ၎င်းသည် ကျွန်ုပ်တို့အား Gamecube နှင့် Wii U တို့မှ ခေါင်းစဉ်များကို ခံစားနိုင်စေပါသည်။ Switch မှ ခေါင်းစဉ်များကို ခံစားရန် အကောင်းဆုံးရွေးချယ်မှုမဟုတ်သော်လည်း၊ developer များသည် ၎င်း၏စွမ်းဆောင်ရည်ကို မြှင့်တင်ရန်နှင့် အင်္ဂါရပ်အသစ်များထည့်ရန် ဤ emulator ကို အခါအားလျော်စွာ အပ်ဒိတ်လုပ်ပါသည်။
၎င်းသည် Nvidia နှင့် AMD ဂရပ်ဖစ်တို့နှင့် တွဲဖက်အသုံးပြုနိုင်ပြီး၊ Windows764-bit သို့မဟုတ် ထို့ထက်မြင့်ပြီး4GB memory လိုအပ်သည်။8 GB ဖြင့် အကြံပြုထားသော ပမာဏ။ ဂရန် ဒီ link ကိုဤ emulator နှင့် တွဲဖက်အသုံးပြုနိုင်သော ဂိမ်းအားလုံးကို သင်တွေ့မြင်နိုင်ပါသည်။
ကျွန်တော်တို့ကိုခွင့်ပြုသည် 1080 နှင့် 60 fps ဖြင့် ခေါင်းစဉ်အများစုကို ကစားပါ။၊ ၎င်းတွင် ကျွန်ုပ်တို့အား rendering၊ resolution၊ shading တို့ကိုမွမ်းမံပြင်ဆင်နိုင်စေမည့်အဆင့်မြင့်ရွေးချယ်စရာအများအပြားရှိပြီး၊ ထို့အပြင်၊ ၎င်းသည် မိတ်ဆက်ခြင်းဆက်တင်များမှ ခေါင်းစဉ်များကို တိုက်ရိုက်မွမ်းမံနိုင်စေကာ၊ ၎င်းသည် အတွေ့အကြုံကိုပိုမိုပျော်စရာကောင်းစေနိုင်သည်။ .
ဒီ emulator ရဲ့ အနုတ်လက္ခဏာကတော့ အဲဒါပါပဲ။ ပံ့ပိုးပေးထားသော ခေါင်းစဉ်အရေအတွက်မှာ အလွန်နည်းပါသည်။ ထိန်းချုပ်မှုများ၏ဖွဲ့စည်းပုံသည် ရိုးရှင်းပါသည်။ ဤ emulator ကို ၎င်း၏ဝဘ်ဆိုဒ်မှတဆင့် တိုက်ရိုက်ဒေါင်းလုဒ်လုပ်နိုင်ပါသည်။ ဒီ link ကို.
Android အတွက် Nintendo Switch emulators
Nintendo Switch အတွင်းတွင်၊ အလားတူ ARM ပရိုဆက်ဆာဖြင့် ပါရှိသော ဟာ့ဒ်ဝဲတစ်ခု ရှိသည်။ လွန်ခဲ့သော4နှစ်ကမှမိုဘိုင်းတယ်လီဖုန်း၏အလယ်အလတ်တန်းစားထဲမှာသို့သော်၊ ဤဂေဟစနစ်အတွက်ရရှိနိုင်သော emulator အရေအတွက်ကို အဓိကအားဖြင့် နှစ်ခုသို့လျှော့ချထားသည်။
Android Nintendo Switch Emulator သည် 2020 ခုနှစ်တွင် စျေးကွက်သို့ရောက်ရှိလာပြီး The Legend of Zelda, Super Mario Odyssey, Pokémon Let's Go ကဲ့သို့သော လူကြိုက်အများဆုံး ဂိမ်းအချို့ကို ဤကွန်ဆိုးလ်တွင် လုပ်ဆောင်နိုင်သည် ... သို့သော်၊ စမတ်ဖုန်းများ၏ ကန့်သတ်ချက်များကြောင့်၊ ခေါင်းစဉ် 81 ခုအထိထောက်ပံ့ပေးသည်။အများစုမှာ ဂိမ်းကစားနေစဉ်တွင် ကြိုးဆွဲချနေခြင်းဖြစ်သည်။
၎င်းသည် c ကိုအသုံးပြုသည့် emulators များထဲမှတစ်ခုဖြစ်သည်။PC အတွက် Yuzu emulator ကုဒ်ဤဆောင်းပါး၏အစတွင် ကျွန်ုပ်တို့ပြောခဲ့သော၊ ထို့ကြောင့် အခမဲ့ဆော့ဖ်ဝဲလိုင်စင်ကို ချိုးဖောက်ခြင်းဖြစ်သည်။
လောလောဆယ်မှာ ဒီ emulator ပါ။ တိကျသော ထိန်းချုပ်ခလုတ်ဖြင့်သာ အလုပ်လုပ်ပါသည်။ စမတ်ဖုန်းနှင့် အံဝင်ခွင်ကျဖြစ်သော မည်သည့်နေရာတွင်မဆို အဝေးထိန်းခလုတ်ဖြင့် တွဲဖက်အသုံးပြုနိုင်သော ဗားရှင်းတစ်ခုကို စတင်ရန် စိတ်ကူးဖြစ်သည်။
သင်ရှိသည် ဤ emulator အကြောင်း နောက်ထပ် အချက်အလက် ဖြတ်. ဒီ link ကို.
Skyline emulator သည် Nintendo Switch အတွက် open source emulator တစ်ခုဖြစ်သည်။ ဖွံ့ဖြိုးဆဲဖြစ်သည်။ ၎င်းသည် Android နှင့် 100% သဟဇာတဖြစ်ရန် ဒီဇိုင်းထုတ်ထားသော်လည်း၊ ကုဒ်မှတဆင့်ရရှိနိုင်သောကြောင့် ၎င်းကို စတင်စမ်းသပ်နေပြီဖြစ်သည်။ GitHubဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုအဆင့်တွင်ရှိနေသော်လည်း၊ တစ်ကြိမ်ထက်ပို၍ ပျက်ကျနိုင်ခြေများပါသည်။
Nintendo Switch emulator များသည် တရားဝင်ပါသလား။
၎င်းတို့သည် အခြားကုမ္ပဏီတစ်ခုမှ ထုတ်လုပ်သည့် နည်းပညာကို အသုံးပြုနေသောကြောင့် ယင်းတွင် Nintendo၊ အခွင့်အရေးမရှိဘဲဤ emulators တစ်ခုမှ အခကြေးငွေ မပေးရသော်လည်း၊
ထို့အပြင်၊ ရနိုင်သောဂိမ်းအားလုံးကို သင့်အတွက် ရနိုင်ပါသည်။ အခမဲ့ download လုပ်ပါဂျပန်ကုမ္ပဏီကို စီးပွားရေးအရ ထိခိုက်နစ်နာအောင် ပံ့ပိုးပေးသည့်အရာ၊
ထင်ရှားသည်မှာ မည်သူမဆို emulator ကို အသုံးပြုရခြင်း ဖြစ်သောကြောင့် ဖြစ်သည်။ Console ကိုဝယ်ရန် သင့်တွင် စီးပွားရေးစွမ်းရည် မရှိပါ။ဒါကြောင့် ကွန်ဆိုးလ်ထုတ်လုပ်သူတွေ အမြဲစွပ်စွဲတဲ့ စီးပွားရေး ထိခိုက်မှုတွေက ဘာမှမဖြစ်ပါဘူး။
ဆောင်းပါး၏လမ်းကြောင်းအပြည့်အစုံ - မိုဘိုင်းဖိုရမ် » အစီအစဉ်များ » PC နှင့် Android အတွက် Nintendo Switch emulators
Gmail စကားဝှက် ပြန်လည်ရယူခြင်း- ရွေးချယ်စရာအားလုံး